Ihembe layo lisondele kumzimba
Ukuze uthathe ikhabethe elifanelekileyo, kufuneka wenze umgudu omkhulu. Zonke izinto ezikulo kufuneka zidibaniswe, ukwenzela ukuba ukwazi ukugcina isitayela sakho, kodwa ngelo xesha unxibe ngendlela eyahlukileyo. Zifanele zenzeke kwaye zikhululekile, kwaye zingabi zihle kwaye zifashane. Ukuba ufuna i-wardrobe enjalo, qwa lasela ingqalelo ekhethiweyo yeekhati, izikhwepha kunye neebhola eziza kunceda ukhangeleke kakuhle.
Ukuba ufunda okanye usebenze, hlabanisa ishishini elinzulu kunye nokuzonwabisa, ngaphandle kwekhati elimhlophe elimhlophe ongenakuyenza. Iphepha elimhlophe lanamhlanje alikho umgca oqinileyo kunye nomnxeba onqabileyo. Imizekelo eyahlukeneyo iya kukuvumela ukuba ukhethe ukhetho olufanelekileyo kokubili iofisi, kunye neqela okanye ukuhamba. Ngoku, iikhati ezimhlophe kunye ne-collar stand stand. Ngokuqhelekileyo bahlotshiswe ngemidiya emikhulu eyenza umfanekiso uvakalelwe.
Eofisini unxibe ihembe ngeklasi yeklasi - ipensela, ukuze iqela lidibanise le shati elinemijelo. Ukuhlukahluka kwimixholo yeemfesi ezinjalo ezifashiniweyo kufumaneka kwiiqoqo zabanikazi abahlukeneyo. Unokuzikhethela kunye nemodeli ebiza, kunye nomzekelo wexabiso lentando yeninzi.
Ukongezelela, iikhati zabesetyhini ngoku zichaphazeleka kwiqhekeza. Baye benza imfashini nakumaxesha adlulileyo, kodwa musa ukukhawuleza ukuba niyeke kwiindlela ezintsha, ngoko unokukhetha ngokufanelekileyo ukhuphelo lwezozonwabisa okanye ukuzizonwabisa. Ikhoyi ingaba enkulu okanye encinci, into ephambili kukudibanisa ngokufanelekileyo i-shirt kunye nezinye iigrafti yakho.
Ekubeni ilanga lasempumalanga sele lizama ukugqithisa amafu asemnyama ebusika, sithintela okanye singabandakanyeki ngokukhawuleza malunga nesigqabi esicacileyo sehlobo. Khawucinge nje ngengubo ehlobo ehlobo ekhethiweyo engenakho phezulu. Ixesha elidlulileyo, ama-frills, ama-frills, izicucu ezinzima zazifanelekileyo. Le mizila igcinwe kuze kube namhlanje. Ungesabi ukunikela ingqalelo kwiimfono ezenziwe njenge-asymmetric, ezihlotshiswe ngamagqabi okanye i-frills. Khetha umbala oqaqambileyo kunye neendlela ezixubileyo. Oku kuya kukuvumela ukuba udibanise phezulu kunye neebhulukhwe kunye ne-leggings okanye ugqoke njengengubo yasebhantsini, eya kwenza ukuba ibe yi-universal.
Kulabo abathanda ukuba phakathi kwenkxalabo kunye nokutsala amadoda, abaqulunqi banikezela ngamacwecwe amacwecwe amancinci avela kwi-silk okanye i-satin.
Qaphela xa ukhetha ukusika. Ukuba ufuna ukufihla iziphoso kumfanekiso kwaye ugxininise isinqeni, ngoko-mnqamlezo ongenamathotho uya kukwenza udibaniso, ngokukodwa aluhambi kumantombazana enemilo emangalisayo. Kodwa inhlanganisela efanelekileyo yobude, ukunqunyulwa kunye ne-flounces kuya kunceda ukukhangeleka kunomphi na umzuzu.
Eli hlotyeni liya kuba yinto edlalwa yi-70's. Le ngqungquthela yinqununu yamahhala e-variegated okanye i-monophonic fabrics enekhono elifutshane. Iiphelo ze-blouse ezinjalo zibophelwa kwisaphetha ukuba ufuna ukuziqhayisa ngesikhumba esinyanyisiweyo kunye nesisu esiqhekezayo.
Khetha umbala osekelwe emthunzini wesikhumba sakho. Ukuba ungumnikazi wesikhumba esilungileyo, ngoko akufanele ukhethe ukukhetha imfono okanye i-beige tones.
Ezi zibuko zibukeka zifana kakuhle ngee jeans, kunye neengubo.
Ukuba ukhetha isitayela esisetyhini kunye nesithandane kwiimpahla, kufuneka ubeke ingqalelo kwiingqungquthela zee-shades ezicokisekileyo. Uninzi lwabenzi bavelisi baye bavelisa iqoqo, apho kukho izinto ezihle kakhulu ezenziwe kwiingubo zendalo. Ezi bhotile ziyonakotyiswa ngamabhobho amnandi, ama-frills, azinakabonakali. Akukho mibala yokumemeza, iinqununu ezinqamlekileyo. Ezi zibuko zidalwe ngokukhethekileyo kubafazi abathandekayo abathandanayo.
Ukuzama ukwenza imfashini, kunzima ukuthatha into efanelwe yona kwaye ayiyi kuba yindleko kakhulu. Kufanelekile ukubazi ukuba abaqulunqiwe bakhulula umgca wesibini weqoqo zabo, apho izinto ezifakekayo ezifunyanwayo zifumaneka kwixabiso elithengekayo. Jonga ingqalelo kwizaphulelo, landela umsebenzi wabalingisi bokuqala, kwaye uya kuhlala uziva ungoyena mnandi kwaye untle kakhulu.
I-Spring Spring: iqoqo leengubo ze-Oliver's dresses
Iibhinqa eziphathekayo eziphathekayo, Ubusika 2016 (umfanekiso): ubusika ngaphantsi kweebhatyi kuya kufakelwa kwi-Autumn-Winter season 2015-2016
Iimpahla eziziphathekayo zabasetyhini ngexesha lonyaka-ehlobo 2016
Indlela yokuseka uxolo kwengqondo?
I-pastry ye-Puff kunye nenkukhu kunye nama-mushroom
Igalelo eliyingozi likamabonwakude kubantwana
Imozulu eMoscow nakummandla waseMoscow ngo-Apreli 2017 - i-Forecast kwi-Hydrometeorological Centre
Iphunga elingaqhelekanga: Indlela yokusika iKhasika yePumpkins kwiHalloween
I-strawberry elula kunye nekhilimu
Kulebyaka nge salmon
Ukuthintela ukukhusela kwamaqanda